Dị akwa akwa ụlọ ọgwụ | Ahụike JBH
Kpọọ Anyị: 0086-18913356391
Ibepu nke Nkpuchi
Dị akwa akwa ụlọ ọgwụ
Ihe ndina ụlọ ọgwụ n'ozuzu na-ezo aka n'àkwà ndị nọọsụ, nke ahaziri dịka mkpa ọgwụgwọ onye ọrịa na omume ibi ụra na-ehi ụra, ma hazie ya na ndị ezinụlọ ya iso ya. Ọ nwere ọtụtụ ọrụ nọọsụ na bọtịnụ ọrụ. Ọ na-eji ihe ndina echekwara echekwa ma dị nchebe, dịka ileba anya ibu, iri nri na azụ, na smart ịtụgharị, igbochi akwa ụra, njikọ nrụgide na-adịghị mma, ilele mkpu mkpu akwa-ndina, njem ụgbọelu, izu ike, ndozigharị (mmeghari ahụ, iguzo ọtọ), ọgwụ infusion na ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike iji akwa ndozi naanị ya ma ọ bụ yana yana ọgwụgwọ ma ọ bụ ngwa nrụzigharị. Akwa ndị nọọsụ na-atụgharị na-adịkarị karịa 90cm n'obosara ma bụrụ otu akwa otu akwa. Ọ dị mfe maka nyocha ahụike, nyocha na arụmọrụ nke ndị òtù ezinụlọ. Enwekwara ike iji ya maka ndị ahụike, ndị nwere nnukwu nkwarụ, ndị agadi, urinary incontinence, ụbụrụ na-emerụ ndị ọrịa na-anụ ma ọ bụ convalescent ọgwụgwọ n'ụlọ, tumadi maka ihe bara uru. Ọkọlọtọ akụrụngwa nke bed bed gụnyere isi nke ihe ndina ahụ, akwa akwa ọtụtụ ọrụ, ụkwụ nke akwa, ụkwụ, akwa ụra, onye na-achịkwa ya, mkpanaka eletriki eletriki ya, ndị nche nchekwa aka ekpe na aka ekpe 2, na 4 gwara mmanụ nkịtị. Ejikọtara tebụl iri nri, 1 mgbochi decubitus air pump atẹ, ihe ndina dị n'okpuru akwa, 2 nsogbu nrụgide jikọrọ akwa-wetting, 1 setịpụrụ nke ihe nleba anya na-arụ ọrụ, tebụl na-agba ncha na ihe ndị ọzọ. Enwere akwa nkịtị, akwa ndozi, na akwa akwa-ọgụgụ isi. A pụkwara ịkpọ akwa akwa ụlọ ọgwụ, akwa ọgwụ, akwa ahụike, akwa ndị nọọsụ na ihe ndị ọzọ. Ha bụ akwa ndị ndị ọrịa na-eji eme oge ọgwụgwọ, mgbatị na mgbake. A na-ejikarị ha eme ihe na nnukwu ụlọ ọgwụ, ebe ahụike obodo, ebe nlekọta ahụike obodo, ụlọ ọrụ ndozi, na nlekọta ụlọ. Ward wdg.
Dabere na ihe a, enwere ike kewaa ya n'ime akwa ABS, akwa akwa anaghị edozi, akwa akwa anaghị edozi, akwa akwa nchara nchara, wdg.
Dị ka ebumnuche ahụ si dị, enwere ike kewaa ya na akwa ọgwụ na akwa ụlọ.
Dabere na ọrụ a, enwere ike ikewa ya na akwa ụlọ ọgwụ eletrik na akwa ụlọ ọgwụ. Enwere ike kewaa akwa ụlọ ọgwụ eletrik n'ime akwa akwa ụlọ ọgwụ eletriki ise na akwa akwa akwa ụlọ ọgwụ eletrik atọ. Enwere ike kewaa akwa ụlọ ọgwụa na akwa akwa ụlọ ọgwụ abụọ, akwa akwa ụlọ ọgwụ, na akwa ụlọ ọgwụ.
Functionlọ akwa ụlọ ọgwụ eletrik na-arụ ọrụ
Ihe ndina ahụ site na ịgbado ọkụ aluminom, akwa akwa bụ ihe eji arụ ọrụ, akwa akwa ahụ na-eku ume. A na-emeso elu akwa ahụ dum site na ịgba spray electrostatic.
Ejiri profaịlụ aluminom mee a na-eche nche ahụ ma nwee ike apịaji.
The ụkwụ anọ ịmụta 125mm ọgwụ okomoko nkịtị na onwe-kpochidoro casters, nke bụ kwụsie ike na a pụrụ ịdabere na.
Tebụl iri nri bụ tebụl iri nri 30cm buru ibu, nke siri ike ma dịgide.
Mpempe akwụkwọ mpịakọta nke azụ: 0-75 Celsius, ntụgharị akụkụ nke ụkwụ: 0-90 Celsius
Akụkụ: 2000 × 900 × 500mm (ogologo × obosara × ịdị elu nke bed)
Lọ mposi gafere: 225 × 190mm
1. Ọrụ azụ
Akụkụ azụ bụ 0-75 Celsius, nke na-ahụta nwayọ nwayọ nwayọ azụ, nwayọ nwayọ n'emeghị ihe mgbochi.
2. Ọrụ nkwagharị
Onye ọrịa ahụ nwere ike ịnọdụ ala n'akụkụ ọ bụla nke 0-90 Celsius. Ikwusie ike, ị nwere ike iri nri na tebụl ma ọ bụ gụọ ma mụọ. Okpokoro iri nri nke multifunctional na-apụ apụ ma nwee ike tinye ya na ala akwa ahụ mgbe anaghị eji ya. Mee ka onye ọrịa ahụ nọdụ ala ugboro ugboro iji gbochie nsị anụ ahụ ma belata edema. Nye aka na mgbake nke agagharị. Mgbe onye ọrịa ahụ nọdụrụ ala, ọ nwere ike wepu ụkwụ akwa ya wee pụọ na akwa ahụ.
3. Mgbochi-eji ọrụ
A na-ebuli elu mgbe ị na-anọdụ ala, nke nwere ike igbochi onye ọrịa ịda mbà mgbe ọ na-anọdụ ala.
4. Nọdụ ala na ọrụ mmamịrị
Ikwanye ite ite iji gbanye ite na ite ahụ. Mgbe ite ahụ dichaala, ọ na-etolite na akpaghị aka nke mere na ite ahụ dị nso n’elu akwa ahụ iji gbochie nsị ịpụ apụ n’elu akwa ahụ. Ọ dị ezigbo mma na onye a gbachitere ịnọ ọdụ kwụ ọtọ ma dinara ala mposi. Beddị ụlọ mposi nke ụdị ụlọ mposi bụ ezigbo ihe ngwọta maka nsogbu nke ndị ọrịa na-arịa ọrịa na-adịte aka. Mgbe onye ọrịa ahụ chọrọ ịmịchaa, maa jijiji ụlọ mposi ahụ na klọọkụ elekere iji weta ite ahụ n’okpuru onye ọrụ, ma jiri ngbanwe nke azụ, ụkwụ na ụkwụ. Ọrụ, onye ọrịa nwere ike urinate na mposi na ihe kasị eke ọdụ ọnọdụ. Mgbe urination na nsị, kpoo ụlọ mposi ahụ n'ụzọ na-adịghị anya iji mee ka efere mposi na bed. Ma ọ ga-edina ala ma ọ bụ na-aga mposi, onye ọrịa ahụ agaghị enwe mmetụta na-enweghị ahụ iru ala, ndị ọrụ nọọsụ ga-ehichapụ ite ahụ mgbe ha nwere onwe ha.
Multifunctional ntuziaka ụlọ ọgwụ bed
N’iburu akwa ABS dị ka ihe atụ, a na-ekewa akwa ndị nwere ọtụtụ ihe ga-eduga na akwa nwere okpukpu abụọ, na akwa ndị na-ejikọ otu ọnụ, na akwa dị larịị.
Ọrụ ngwaahịa nke akwa ụlọ ọgwụ ntuziaka yiri nke akwa ụlọ ọgwụ eletrik, mana onye ọrịa enweghị ike ịrụ ọrụ n'onwe ya ma chọọ enyemaka nke onye na-eso ya. Ebe ọ bụ na ọnụahịa dị ala karịa nke ụlọ ọgwụ eletrik eletrik, ọ kachasị mma maka ndị ọrịa nọ n'àkwà maka obere oge. N'otu oge ahụ, ọ na-ebelata ibu na nrụgide nke ndị ọrụ na-eso ya.
Igwe anaghị agba nchara àkwà abụọ rocker ọgwụ bed
Igwe anaghị agba nchara akwa akwa, nchara agbasara akwa akwa na akwa akwa nwere ezi uche na nhazi na inogide. Ọ nwere ike ịmata ọrụ abụọ nke azụ na ụkwụ na-ehulata. Okwesiri ka ndi oria toro eto ghara ida n’elu akwa ma obu nsogbu iru aru. Ọ na-enye ha ọrụ nlekọta pụrụ iche dị mkpa maka mgbake, ọgwụgwọ, njem na ndụ kwa ụbọchị, meziwanye nlekọta, ma melite ogo ndụ nke ndị ọrịa, ọkachasị Ezinaụlọ, ụlọ ọrụ nlekọta ahụike obodo, ụlọ ndị nọọsụ, ụlọ ọgwụ geriatric
Post oge: Jul-23-2020
recliner bed maka ndị ọrịa, akwa na-elekọta akwa, ọgwụ na-ewepu ọgwụ, ike ụlọ ọgwụ, nkpuchi ihu ọnụ, zuru ezu akpaka ụlọ ọgwụ bed,
Anhui JBH Medical ngwa ngwa Co., LTD
Ihe ndina ụlọ ọgwụ na-ezo aka n'àkwà nọọsụ, nke ahaziri dịka mkpa ọgwụgwọ nke onye ọrịa na omume ibi ndụ na-ehi ụra, ma hazie ya na ndị ezinụlọ ya ...
Ọrụ na ụdị ndidi na-ebuli
Ọrụ nke mbuli maka ndị ọrịa kpọnwụrụ akpọnwụ: vingkwaga ndị mmadụ na-agagharị na-adịghị mma site n'otu ọnọdụ gaa n'ọzọ nwere ike ibuli onye ọrịa site na ala gaa n'ihe ndina; Chassis ụkwụ nwere ike imeghe ...
Nhazi ọkwa na ụkpụrụ nke nkpuchi
Disposable Medical nkpuchi: Disposable ọgwụ nkpuchi: O kwesịrị ekwesị maka ịdị ọcha nchebe na a n'ozuzu ọgwụ na gburugburu ebe obibi ebe ọ dịghị ihe ize ndụ nke ahu oke mmiri na splashing, adabara gen ...
recliner bed maka ndị ọrịa, akwa na-elekọta akwa, zuru ezu akpaka ụlọ ọgwụ bed, nkpuchi ihu ọnụ, ike ụlọ ọgwụ, ọgwụ na-ewepu ọgwụ,